Falanqeyn: Tolow Turki talo qoran ma la tagnay? - Caasimada Online
Home Maqaalo Falanqeyn: Tolow Turki talo qoran ma la tagnay?
Falanqeyn: Tolow Turki talo qoran ma la tagnay?
Aad baan ugu farxay, ogaalka socdaalka MW ku tagay dalka Turkiga, oo ka mid ahaa wararka aan muddaba u dhagataagayey. Runtase farxadda waxaa iigu lammaansaneed weydiimo iyo waxoogaa yaroo walaac ah.